विभाजनकै विरासतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन -
विभाजनकै विरासतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०९:३१ December 31, 2020 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on विभाजनकै विरासतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन
वि. सं. २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म आइपुग्दा जुटेको भन्दा फुटेको इतिहास धेरै छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत ७१ वर्षे इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु लगभग ७१ पटक नै विभाजन भएका छन् । टुटफुट र विभाजनको यो विरासतीय श्रृङ्खला बढ्दै जाँदा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली समूह) र प्रचण्ड-माधव समूहका नाम थपिएका छन् ।
नेपाली नागरिकले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको करिब दुई तिहाई मतको यो विभाजन देशकै लागि घात र चिन्ताको विषय हो। एक-अर्कालाई अनेकौँ आरोप-प्रत्यारोप र सत्तोसराप गरी आफूलाई मात्र सच्चा कम्युनिस्ट ठान्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु अहिलेसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी बनिसकेका छन् ।
गरिब, सर्वहारा, किसान, मजदुर र महिला हकहितको सुनिश्चितताका नाममा गठन भएका लगभग सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु आज नवसामन्तका रुपमा परिणत भएको देखिँदैछ । त्यसैले त त्याग र संघर्षको गर्विलो इतिहास बोकेका नेपाली कम्युनिस्टहरुको वर्तमान अत्यन्तै बदनाम र विवादित बन्दैछ । यसले कम्युनिस्टहरुको दर्शन, सिद्धान्त र स्कुलिङ्मै खोट छ कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।
टुटफुट र विभाजनकोे गञ्जागोल इतिहास
पुष्पलालको अगुवाइमा नेपालमा विसं २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । सुरुमा पार्टीमा जम्मा ५ सदस्य (पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी) रहेका थिए ।
सुरुदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पहिलो पर्चा छरेको दिन २००६ वैशाख १० (२२ अप्रिल,१९४९) लाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मान्ने कि पार्टीको केन्द्रीय समिति, विधान र घोषणापत्र जारी गरेको २००६ भाद्र ३० गते ( १५ सेप्टेम्बर,१९४९) लाई पार्टीको स्थापना दिवस मान्ने ? लामो समय यही विषयको विवादमा कम्युनिस्ट राजनीति केन्द्रीत भइरह्यो ।
तत्पश्चात् ‘राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?’, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो कि हतियारबन्द आन्दोलनको बाटो ?’ भन्ने विवादमा तानिएको कम्युनिस्ट पार्टी समयानुकूल परिस्थितिको व्याख्या-विश्लेषणको बहाना र एक अर्काबीचको आरोप-प्रत्यारोपमै पटकपटक विभाजित भइरहेको छ ।
स्थापनाको ४ वर्षपछि विसं २०१० मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो । महासचिवमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए । १४ सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजंग रायमाझी महासचिव बने । रायमाझीकै कारण २०१७ सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक विभाजन भयो ।
२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि रायमाझी कालान्तरमा राजदरबार पसे । पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंह र मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरु पनि क्रमशः त्यतिखेरका शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित हुन थाले ।
वि. सं. २०१९ मा तेस्रो महाधिवेशनले तुल्सीलाल अमात्यलाई महासचिव निर्वाचित गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास गर्यो । पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीमा विभिन्न गुट-उपगुटहरु देखिए । त्यसबेला खास गरेर रायमाझी समूह, तुल्सीलाल समूह र पुष्पलाल तीन समूहमा पार्टी विभाजन भयो ।
उता रायमाझीले छुट्टै तेस्रो महाअधिवेशन गरेर आफू महासचिव भएको घोषणा गरे । पछि फेरि यो समूह बर्मा समूह र मानन्धर समूहमा विभाजित भयो । २०२३ सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी लगभग अवसानको सङ्घारमा थियो । एकातिर पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी गठन भयो भने अर्कोतिर केशरजंगको समूह छुट्टियो । त्यसको एक वर्षपछि पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गराए ।
२०२५ सालमा तेस्रो सम्मेलन गरी पुष्पलालको नेतृत्वमा पार्टी गठन भयो । तेस्रो महाधिवेशनबाट फुट भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भन्दै जेलबाट छुटेर आएका नेताहरु मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठहरुको नेतृत्वमा २०२८ सालमा केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन भयो ।
२०२८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अर्का दुईवटा प्रष्ट लाइन देखा परे । झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्यूक्लियस । पुष्पलालको पार्टी यी दवैमा थिएन । पुष्पलाल समूहमा रहेको पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँंग सम्बद्ध झापा जिल्ला कमिटीले २०२७ सालको अन्ततिर झापामा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो । फलस्वरुप २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेशन कमिटी (माले) को गठन भयो ।
यसमा २०३४ मा मुक्तिमोर्चा र पूर्वको रातो झण्डा समूहलगायत धेरै कम्युनिस्टका झुण्डहरु एकताबद्ध भए र अन्तमा २०३५ सालमा नेकपा(माले) को स्थापना गर्यो । २०३५ सालमै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो ।
मोहनविक्रम सिंहले २०३१ साल भदौमा चौथो महाधिवेशन गरी अर्को पाटी बनाए । मोहनविक्रमले अर्को पार्टी बनाएपछि २०३६ मा एकता सम्मेलन गरी मनमोहनलगायतले नेकपाको घोषणा गरे । मोहनविक्रम सिंहको चौंथो महाधिवेशनले २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गर्यो । राजाले गराएको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर पार्टीभित्र पुन : मतभेद सुरु भयो ।
२०४० सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो र नेकपा (चौम) भन्ने नयाँ दल बनायो । मोहनविक्रमको समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो । मोहनविक्रमलाई महामन्त्री छानियो । नेकपा मसालको पाँचौं महाधिवेशन पनि जुट्नेभन्दा फुट्ने कारण बन्यो । प्रचण्डले मोहनविक्रममा सैद्धान्तिक विचलन रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि फुटको श्रृङ्खला पुन: सुरु भयो ।
चौथो महाधिवेशन पक्षधरहरुले विरोधको तारो बनाएको को-अर्डिनेशन केन्द्र अर्थात् झापा विद्रोह र पुष्पलाल समर्थकहरुको एकीकरणबाट नै पहिले (२०३५ मा) नेकपा (माले) र पछि (२०४७ मा) नेकपा (एमाले)का रुपमा परिणत भयो ।
२०४० सालपछि नेकपा संयुक्त चौम, नेकपा (मशाल),नेकपा(मसाल) नेकपा (चौम) तीन समूहमा विभाजन हुन पुग्यो । पाँचौं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा मोहन वैद्य (किरण) निर्वाचित भए । २०४२ सालमा मोहनविक्रमले चित्रबहादुर केसीसहित ४ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर नयाँ पार्टी नेकपा मसाल बनाए । वैद्य नेतृत्वको पार्टीको नाम नेकपा मशाल राखियो ।
२०४५ सालमा नेकपा (मशाल) को सम्मलेन गरी.प्रचण्ड महामन्त्री बने । एकताको दुई वर्षमै नयाँ पार्टीमा सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर फेरि मतभेद सुरु भयो । निर्मल लामाहरुले एकता केन्द्र छोडे । २०५१ मा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लिलामणि पोख्रेलहरु मिलेर छुट्टै नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन गरे । यता प्रचण्ड नेतृत्वको एकता केन्द्रले नाम फेर्यो । नेकपा माओवादी राख्यो र उसले १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन गर्यो ।
यसबीचमा मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रभित्र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फेरि मतभेद सुरु भयो । अनि २०६३ सालमा उनीहरु पनि फेरि फुटे । १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेर २०६२-०६३ सालपछि खुला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादीमा पनि तीव्र रुपमा फुट सुरु भयो । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द फुटेर दुई ओटा छुट्टाछुट्टै पार्टी खोले । बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोडे ।
२०४७ सालमा प्रथम सम्मेलन गरी सक्रिय भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि अलग्गै पार्टीका रुपमा छ । यसै सन्दर्भमा २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि २०४७ साल चैत्र महिनामा नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भएर नेकपा (एमाले) बन्यो । अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदन भण्डारी चुनिए ।
२०४९ सालमा काठमाण्डौमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्यो । २०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्युपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बने ।
विसं २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न एमालेको छैठौं महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपाल नै महासचिव चुनिए । यस महाधिवेशनमा वामदेव गौतमको फरक मतको लाइन र महाकालीसन्धि सम्बन्धमा विवाद भयो । अन्ततः २०५४ सालमै त्यस पार्टीमा पनि फुट भएर पुनः नेकपा.(माले) को जन्म भयो ।
नेकपा एमालेको सातौँ महाधिवेशन २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न भयो । माधव नेपाल महासचिवमा निर्वाचित भए । बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नेकपा (एमाले ) को नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा काठमाण्डौमा भयो । अध्यक्षमा माधव नेपाललाई पराजित गरी केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए ।
दर्शन र सिद्धान्तमै खोट छ कि ?
विसं २०७५ सालमा तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरी बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर पुनः विभाजित भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको श्रृङ्खलाबद्ध फुटको इतिहासमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केपी ओली समूह) र (प्रचण्ड-माधव समूह) का नाम थपिएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुका यी टुटफुट, गुट र विभाजनको विरासतीय श्रृङ्खलाहरु नेपाली जनजीविकाका तमाम समस्याहरु हल गर्नेतर्फ नभइ फगत सत्तास्वार्थ र पदप्रतिष्ठाकै लागि हुन् भन्ने तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
पटक-पटकका विभाजन र टुटफुटले नेपाली कम्युनिस्टहरुको दर्शन, सिद्धान्त र स्कुलिङ्मै खोट छ कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ । कम्युनिस्ट इतिहासको यो प्रवृत्तिले नेपालको कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त र स्कुलिङ्को शैलीमा पुनर्विचार र पुनर्व्याख्याको आवश्यकतालाई बोध गराउँछ ।
जे भए पनि नेपाली नागरिकको सात दशक लामोे आन्दोलन, त्याग, बलिदान र रक्तरञ्जित सङ्घर्षपछि देशले प्राप्त गरेको महान् उपलब्धि नेताहरुकै फगत सत्तास्वार्थ, व्यक्तिगत इगो, पद-प्रतिष्ठा र अवसरकै चपेटामा परेर पुनः गुम्न लागेको छ । देशका लागि यो नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
ज्ञवाली रूपन्देहीका वाम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ ।
बेलडाँडीको श्री सिद्ध बैजनाथ बहुउद्देश्यीय सहाकारी संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न
पुनर्वास -१ की ७१ वर्षीया खण्टी भुलको हत्या गर्ने अभियुक्त पक्राउ
डा. देवी नेपाल, सांसद आङ दावा शेर्पा, रामकाजी कोने
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:४७ February 23, 2020 KKK
नक्सा सबै मिलेर जारी गरेको हो, कोही महान् राष्ट्रवादी कोही दलाल छैन: प्रचण्ड
२९ असार २०७७, सोमबार १०:११ July 13, 2020 Kanchanpur Khabar
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:३० May 20, 2020 Kanchanpur Khabar
कांग्रेस महाधिवेशन : गुट बलियो बनाउन होडबाजी सुरु
१२ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:५३ July 27, 2020 Kanchanpur Khabar
रक्षामन्त्रीलाई प्रश्न : कालापानी भ्रमण औपचारिक कि व्यक्तिगत ?
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:५५ May 18, 2020 Kanchanpur Khabar
आज सोलुखुम्बुकी स्रष्टा शान्ति शर्माको दोस्रो
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:१८ February 23, 2020 KKK
धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गरौं : साझा पार्टी
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १९:०४ February 29, 2020 Kanchanpur Khabar
उखु खेति कम हुदै, सुगर मिलहरु संकटमा
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:०२ February 23, 2020 KKK
मतदाता सूची जारी गर्दै आयोग
नेपालमा ‘फाइभ–जी’ को तयारी सुरु
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अभियान संञ्चालन गर्न सरकारले ‘ड्राई रन’ को तयारी
भिमदत्तको दुर्गम बस्ती खल्ला मच्छेटीमा पहिलोपटक विद्युत सेवा सुचारु
त्रिवि र आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकबीच सात बुँदे सहमति
चुनावको तयारी : मतदाता नामावली तयारीसँगै मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारणको काम सुरु